कोभिड १९ को महामारीमा पत्रकार कसरी जोगिने ? - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home बिचार कोभिड १९ को महामारीमा पत्रकार कसरी जोगिने ?
By रामसूदन तिमल्सिना
कुनै प्राकृतिक प्रकोप, महामारी तथा ठूला घटना भएको समयमा पत्रकार अझ सक्रिय हुन्छन् । पत्रकारिता पब्लिक सर्भिस हो । यो कहिल्यै पनि रोकिदैन । कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासमा विश्वका धेरै मुलुक लकडाउन भएका छन् । मानिसहरु घरभित्रै बसिरहेका छन् । तर पत्रकारले अहिले पनि प्रेस कन्फरेन्स, स्थलगत रिपोटिङ्ग गरिनै रहेका छन् । यस्तो अवस्थमा कसरी संक्रमणबाट बचेर रिपोटिङ्ग गर्ने यो महत्वपूर्ण विषय हो ।
प्रेस कन्फरेन्समा सहभागी भएका पत्रकार संक्रमित भएको समाचार पनि आइरहेका छन् । त्यसैले यो जटिल अवस्थामा पत्रकारले आफ्नो स्वास्थ्यलाई बचाएर पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।
गत फेब्रेओरीमा ब्राजिलको २२ सदस्यीय एक उच्चस्तरी प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकाको भ्रमण गरेको थियो । जसमा केही कोरोना संक्रमित भए । पत्रकार मारिना गायसले सो ट्रिपको स्टोरी कभर गरेकी थिइन् । उनी स्वयं एकान्त बासमा बसिन् । उनले पोष्ट गरेअनुसार वासिङ्टनमा झ्यालविहीन कोठामा भएको बैठकमा पनि उनी सहभागी भएकी थिइन् । त्यसैले भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना ज्यादा थियो ।
ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनलाई पच्छाउँदै देशका व्यवसाय (मिडियासहित) का लागि एउटा गाइडलाइन नै बनायो । जसमा भर्चुअल मिटिङको सिफारिस गरिएको छ । अनावश्यक ट्रिप रद्द गर्न र कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
नेपालमा यतिबेला ठूला मिडियाका पत्रकारले पनि घरबाटै काम गर्न थालेका छन् । भर्चुअल मिटिङको मजासमेत लिइरहेका छन् । कोभिड १९ ले पत्रकारितामा नयाँ प्रविधिको अत्याधिक उपयोगमा जोड दिएको छ । ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस सुरक्षात्मक कवजका रुपमा धेरै देशमा कार्यान्वयन भएको छ ।
तथापी सबैले घरबाटै काम गर्ने सम्भावना रहँदैन । स्थलगत रिपोर्टिङ र न्युज रुममा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दुरी कायम राखेर बस्ने, हातमा पन्जा लगाउने, माक्स लगाउने, अन्तर्वार्ता लिँदा निश्चित दूरी कायम राख्न सल्लाह दिन्छन् डा प्रकाश बुढाथोकी । तर, खुला स्थानमा लिइने अन्तवार्ता वा प्रतिक्रिया लिँदा को संक्रमित छ भनेर भन्न सकिदैन । त्यसैले सर्जिकल मास्क अनिवार्य लगाएर मात्र फिल्ड वर्कमा जान चिकित्सकहरुको सल्लाह छ ।
तर, अझै पनि सामान्य मास्क लगाएर पत्रकारहरु अस्पताललगायत अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा रिपोर्टिङ गरिरहेका भेटिन्छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ती जारी गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बनलाई पहिलो सर्त बनाउन सिफारिस गरेको भए पनि अझै बलियो रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको त छैन ? सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बाज्रिलका विशेषज्ञ डा सुलेइमानले फिल्ड रिपोर्टिङमा सानो टिम जानुपर्ने सल्लाह दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘१९९० ताका जब एचआईभीको रिपोर्टिङमा पत्रकार हिड्थे त्यतिबेला एउटै टिभिको ४÷५ जनासम्मको टिम हुन्थ्यो । तर अहिले यो महामारीको समाचार कभर गर्न थोरै मानिसलाई प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छु । जसले तेज गतिमा संक्रमण फैलिन सहयोग गर्दैन ।’
टिभि रिपोर्टरले दुईवटा माइक्रोफोन प्रयोग गर्न सल्लाह दिएका छन् । एउटा आफ्नै लागि र अर्काे जोसँग प्रतिक्रिया लिइन्छ वा अन्तर्वार्ता लिइन्छ उसका लागि ।
७० प्रतिशत मदिरा रहेको समाग्री वा मदिराले ती सामाग्री प्रयोग गरेपछि सफा गरिहाल्नुपर्ने सुझाव विभिन्न चिकित्सकहरुले दिएका छन् । अहिले नेपालका कतिपय मिडिया हाउसले फिल्डमा जाने पत्रकारका लागि ह्यान्ड सेन्टिटाइजर उपलब्ध गराउन थालेका पनि छन् । तर, अझै यसको प्रयोगमा संवेदनशिलता देखिएको छैन । एउटा पत्रकार संक्रमित हुँदा ऊ धेरै स्थानमा पुग्ने भएकाले संक्रमण फैलिन सक्ने डर पनि त्यति नै बढी हुन्छ । त्यसैले ऊ सुरक्षित हुनु समाजलाई सुरक्षित बनाउनु हो भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।
विकसित देशहरुले त अहिले सम्बन्धित अस्पताल, मन्त्रालयलगायतले उत्पादन गरेका सामाग्रीलाई नै प्रयोग गर्न समेत प्रोत्साहित गरेका छन् । फोटो, भिडियो सामाग्रीहरु अस्पतालले नै तयार गरेको छ भने पत्रकारले त्यसलाई प्रमाणित गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जसले फिल्डमा कम जनशक्तिको प्रयोग गर्दा पनि हुने अवस्था रहन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि भिडियो कन्फरेन्समार्फत प्रेस मिट हुन थालेका छन् । समाजिक सञ्जालमा सन्देश प्रवाह गर्न थालिएको छ । तर अझै पनि पत्रकार बोलाएर प्रेस मिट गर्न भने छोडिएको छैन । प्रविधिलाई यसरी अवलम्बन गर्दा कोभिड १९ को संक्रमणबाट पत्रकार जोगिन्छन् ।
ओपन स्पेस पनि पूर्ण सुरक्षित रहँदैन । एक अध्ययनले २ देखि ३ घन्टासम्म कोरोना भाइरस हावामा पनि रहने देखाएको छ । जसका कारण कम व्यक्तिको आउजाउ हुने स्थानको प्रयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । पत्रकारले फिल्डमा जाँदा अनिवार्य सर्जिकल मास्क लगाउनुपर्छ । त्यसको काम गर्ने अवधि भएकाले एकै ठाउँमा २ घन्टा बढी रहेर रिर्पोटिङ गर्ने वा अन्तर्वार्ता लिन नहुने समेत चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
यो पनि पढ्नुहोस बिरामी बोकेको भ्यान त्रिशूलीमा खस्दा तीन बेपत्ता
यसो गर्दा पत्रकारलाई संक्रमण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ
सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्ने
न्युजरुमलाई प्रत्येक दिन ७० प्रतिशत मदिरा रहेको सामाग्रीले सफा गर्ने ।
२० सेकेन्ड लगाएर बारम्बार हात धुनका लागि सुविधा दिने र प्रोत्साहित गर्ने ।
आवश्यक हुँदा मात्र प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिने
सर्जिकल मास्क लगाउने । यसलाई तोकिएको समयमा डिस्पोजल गरी पुनः अर्काे मास्क लगाउने ।
३ देखि ६ फिटको दूरीमा बसेर अन्तर्वार्ता लिने ।
दुईवटा माइक्रोफोनको प्रयोग गर्ने । अल्कोहल र डिस्पोजल रुमालले सेनिटाइज गर्ने ।
प्रयोग गर्ने सामाग्री नियमित सफा गरिरहने ।
दुईभन्दा ठूलो टिम एउटै भ्यानमा बसेर समाचार संकलनमा नजाने ।
प्रदेश ५ ओपेन्द्र बस्नेत - November 26, 2020
तुलसीपुर । पाँच गोली लागेको अवस्थामा तुलसीपुर एक व्यक्ति फेला परेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ बराहाखुटी निवासी ४५ बर्षीय खुशलराम पौडेल...
प्रदेश ४ राजधानी समाचारदाता - November 22, 2020
लमजुङ । लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रुको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिका – ६ भोर्लेटार बजारका ३५ वर्षीय नवराज पौडेलको...
Breaking News भगीरथ भण्डारी - November 21, 2020
इलाम । इलाम नगरपालिका १० का किसोर सिंह खत्रीले धान फल्ने खेत मासेर रुखको विरुवा रोपे । उनले खेती मासेर रुखको विरुवा रोप्दा धेरैले...
सुभाष साह - August 4, 2020
डोटीमा ५९ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ४५ जनामा संक्रमण
प्रदेश ७ दीपक ओली - August 25, 2020
धनगढी । डोटीमा ५९ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ४५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जिल्ला अस्पताल डोटीले मंगलबार ५९ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा...
खेल राजधानी संवाददाता - July 23, 2020
प्रदेश १ रासस - July 24, 2020
ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्न सुझाब
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - June 30, 2020
काठमाडौं । नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद छाड्न आग्रह गरेका छन् । ओलीले आइतबार आयोजित...
गोकुल बाँस्कोटाको घरमा बम विस्फोट गराउने मुख्य योजनाकार पक्राउ
प्रदेश ३ रासस - July 1, 2020
भक्तपुर । पूर्वसञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको घरमा बम विस्फोट गराउने मुख्य योजनाकार मानिएका ऐनबहादुर शाही भन्ने विजय शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ...
खेल एजेन्सी - November 21, 2020
लन्डन । इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका मुख्य प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले क्लबसँग सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । स्पेनिस प्रशिक्षक ग्वार्डिओलाले बिहीबार थप दुई वर्षका लागि...
प्रशान्त वली - November 20, 2020
सुरेश पन्त - November 20, 2020
टेनिस रोका - November 23, 2020